ခေတ်မီဧည့်ခန်းများကို ဆေးခြယ်နည်း- အရောင်များကို ကောင်းစွာရွေးချယ်ပါ။ အလှဆင်
ခေတ်မီဧည့်ခန်းများကို ဆေးခြယ်နည်း- အရောင်များကို ကောင်းစွာရွေးချယ်ပါ။
မာရီယာ vazquez | | အလှဆင်
Decoora မှာ အရောင်တွေနဲ့ အိမ်အလှဆင်ရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတာတွေကို အရှည်ကြီးပြောထားပါတယ်။ ငါတို့ရွေးချယ်တဲ့အရောင်တွေကို အထူးဂရုပြုရမယ်။ ခန်းမများကို ဆေးသုတ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါတို့က သူတို့အတွက် အချိန်အများကြီးပေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ခေတ် ဧည့်ခန်းတွေကို ဘယ်လိုဆေးခြယ်ရမလဲဆိုတာ အရေးကြီးကြောင်း မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဧည့်ခန်းသည် များသောအားဖြင့် အိမ်၏အကျယ်ဆုံးအခန်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သေးငယ်တဲ့ အခါမှာတောင် အခန်းကို ဆေးခြယ်ဖို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ အရောင်က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သင်၏ စရိုက်လက္ခဏာတစ်ခုလုံးအပေါ် သက်ရောက်မှုနှင့် လွှမ်းမိုးမှု. အမှားမလုပ်ချင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံဉာဏ်ကို အာရုံစိုက်ပါ။ ရှေးရိုးဆန်ဆုံးနှင့် အရဲရင့်ဆုံး နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အကြံဉာဏ်။
အထောက်အကူပြုဖို့အပြင်အရောင် တိကျတဲ့အလှဆင်စတိုင်မြှင့်တင်ရန် ဧည့်ခန်းထဲမှာ အခန်းရဲ့ လေထုကို လွှမ်းမိုးနေလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးသင့်တာက အခန်းကို ဘယ်လိုသုံးချင်လဲ ၊ အရောင်ကို ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲ။ ရင်းနှီးပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်စေချင်ပါသလား။ ဖန်တီးမှုနေရာတစ်ခု ဖန်တီးရန် ရှာဖွေနေပါသလား။ ခေတ်မီပြီး ဆန်းပြားတဲ့စတိုင်ကို သင်နှစ်သက်ပါသလား။ ဤမေးခွန်းများအတွက် အဖြေများသည် ထင်ရှားသောအရောင်ကို အကြီးအကျယ် ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။
3 အနက်ရောင်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်များ
4 စူးရှသော နွေးထွေးသော အသံများတွင် ကွဲလွဲမှုများ
အဖြူရောင်က တောက်ပသောအရောင် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မတူညီသောအရောင်များဖြင့် ကစားနိုင်ပြီး မတူညီသော အလှဆင်စတိုင်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်သည်း အဖြူရောင်နံရံများ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်ကြမ်းပြင်အမျိုးအစားနှင့်မဆို ပေါင်းစပ်ကာ ပရိဘောဂကို ထင်ရှားကျော်ကြားစေသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဖြူရောင်စစ်စစ်သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ နွေးထွေးပြီး ကြိုဆိုသောနေရာများရရှိစေရန်အတွက် သစ်သား၊ သဘာဝအမျှင်များနှင့် အပင်များအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော တောက်ပသောအရောင်။ သို့သော် ယခုအချိန်တွင် ဤဖြူစင်သောအဖြူရောင်သည် ဖြူစင်သောအသွင်ကို ဆောင်နေသည်။. နွေးထွေးမှု ပိုရှိတဲ့ အဖြူရောင် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အလှဆင်ထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြီးပြည့်စုံစွာ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် ဖန်တီးရန် အကောင်းဆုံးအရောင်ဖြစ်သည်။ စိတ်အေးလက်အေးနှင့် မိသားစုအငွေ့အသက်. ပျော့ပျောင်းသော်လည်း ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသော မျဉ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့် ခေတ်မီသောထိတွေ့မှုကို ပေးဆောင်ရန် ပရိဘောဂတွင် တာဝန်ရှိသည့်နေရာများတွင် နောက်ခံကားချပ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန်။
မီးခိုးရောင်သည် သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရောင်ဖြစ်သည်။ ဖန်တီးရန် ခေတ်မီစတိုင်နေရာများ။ ဧည့်ခန်းကို ဆေးခြယ်ရန် ထိုအရောင်ကို လောင်းကြေးထပ်မည်ဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသူ အများအပြားရှိသည်။ သို့သော် သင့်အရောင်ကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် မီးခိုးရောင် အရိပ်များစွာထဲမှ ရွေးချယ်မှုသည် လွှမ်းမိုးနိုင်သည် ။
ယေဘူယျအားဖြင့် အလင်းအမှောင်များသည် သေးငယ်သောနေရာများကို အလင်းရောင်ပေးရန်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။. ဤသံစဉ်များသည် ဧည့်ခန်းတွင်ရှိနိုင်သည့် ပရိဘောဂများနှင့် အနုပညာလက်ရာများကို ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ အဖြူရောင်ဆိုဖာတစ်ခုသည် နံရံပေါ်ရှိ မီးခိုးရောင်ကို မီးမောင်းထိုးပြမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ခေတ်မီပြီး အံဝင်ခွင်ကျရှိသော လေထုကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်ပြီး pastel အရောင်များဖြင့် တစ်လုံးသည် ပိုမိုရင်းနှီးပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော လေထုကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း မီးခိုးရောင်သည် အရိပ်များစွာတွင် သက်ရောက်နိုင်ပြီး အမှောင်ရိပ်များကဲ့သို့ ရေပန်းစားခြင်းမရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ကို ကြည့်ရှုရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ခေတ်မီဧည့်ခန်းများကို အမှောင်ရောင်ဖြင့် ပန်းချီဆွဲခြင်းသည် အန္တရာယ်များသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် စွန့်စားရတာက သူ့မှာ အကျိုးရှိတယ်။ ဤပုံစံဖြင့်အလှဆင်ထားသောအခန်းများသည် လုံလောက်သောအတိုင်းအတာနှင့် သဘာဝအလင်းရောင်ကောင်းများပါရှိသောကြောင့် အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။
အချို့နေရာများတွင်ရော အခြားနေရာများတွင်ပါ မီးခိုးရောင်ကို လောင်းကစားရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုတည်းသော ကြောက်ရွံ့မှုမှာ ဤနေရာများသည် အေးနေမည်ဆိုပါက၊ အပူချိန်ကို မြှင့်တင်ပေးသော အခြားအရောင်များနှင့် လိုက်ဖက်ရန် သေချာရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဲဒါ ဘယ်မှာလဲ။ သစ်သားနှင့်သားရေကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ သူတို့သည် မဟာမိတ်ကောင်းများ ဖြစ်လာကြသည်။
အကွောငျး သစ်သားကြမ်းပြင်နှင့် မီးခိုးရောင်နံရံများ ပုံသွင်းခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် ကြော့ရှင်းပြီး ဆန်းပြားသော နေရာများကို ဖန်တီးရန် ပြီးပြည့်စုံသော အတွဲတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ နက်မှောင်သောသစ်သားများတွင် ပရိဘောဂအသေးစားများနှင့် မီးခိုးရောင် ကော်ဇောကြီးတစ်ခုကို အချို့သောဆိုဖာများတွင် ထည့်ပါက ဆယ်နေရာရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဖြူကဲ့သို့ အနက်ရောင်သည် အခြားအရောင်များကို မိတ်ဆက်ပေးကာ အလှဆင်ခြင်းနှင့် ကစားရန် ပြီးပြည့်စုံသော ကင်းဗတ်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမယ့် သတိထားပါ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်မှာ အာကာသကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Decoora တွင် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။ အလယ်အလတ်တွင် အနက်ရောင်လောင်းပါ။.
ခေတ်မီဧည့်ခန်းများကို ဆေးခြယ်နည်းဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုချက်များထဲတွင် အနက်ရောင်သည် ပျောက်ဆုံးနေမည်မဟုတ်ပေ။ ဒါပေမယ့် ဖန်တီးလိုက်ရုံပါပဲ။ သေးငယ်သောနံရံများ သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်အသေးစိတ်များ ကျွန်ုပ်တို့၏အလှပြင်ဆိုင်များတွင် ဤအရောင်ကိုသူတို့၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်စေရန်။ မီးဖိုကို ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ ပင်မပရိဘောဂကို ပံ့ပိုးပေးသော နံရံ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ထားသည့် စင်၏အောက်ခြေသည် အရင်းအမြစ်ကောင်းများဖြစ်သည်။
စူးရှသော နွေးထွေးသော အသံများတွင် ကွဲလွဲမှုများ
အဝါရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်တို့ဖြစ်ကြသည် နွေးနှင့်အရေးပါသောအရောင်များ ငါတို့aည့်ခန်းခြယ်ဖို့ခဲခဲတာပေါ့။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့သည်ပျော်စရာနှင့်ဖန်တီးမှုနေရာများဖန်တီးရန်စိတ်ကူးကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည် သူတို့၏မူရင်းကြောင့်သတိမပြုမိသောနေရာများ။ မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
နံရံများအားလုံးကို ဤအရောင်များဖြင့် ပန်းချီဆွဲခြင်းသည် လွှမ်းမိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နံရံတစ်ခုတည်းကို ဆေးသုတ်ပါ။ ဂျီဩမေတြီပုံစံများဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို မီးမောင်းထိုးပြပါ။အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းသည် အညီအမျှ သိသိသာသာ ထင်ရှားသော်လည်း အမြင်အာရုံ ပိုမိုထိရောက်သည်။ တံခါးဘောင်အတွင်းပိုင်းကဲ့သို့ သေးငယ်သော အရာတစ်ခုပင်လျှင် နေရာတစ်ခုလုံးကို ဤအရောင်များအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဝါရောင်နှင့် လိမ္မော်ရောင် နှစ်မျိုးစလုံးသည် အဖြူရောင်နံရံများနှင့် ဤနေရာမျိုးတွင် ကောင်းစွာ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ မီးခိုးရောင်ဖြင့် ပရိဘောဂနှင့် အထည်အလိပ်များ၊ ထို့ကြောင့် လူမှုရေး သို့မဟုတ် အနားယူရန် ရည်ရွယ်ချက်အပြင် နောက်ထပ် ဖန်တီးမှုတစ်ခုပါရှိသည့် အခန်းများကို အလှဆင်ရန် သင့်အတွက် ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပါ။
ဤသည်မှာ ခေတ်မီဧည့်ခန်းများကို ဆေးခြယ်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်မေးခွန်းကို ဖြေပေးမည့် အဆိုပြုချက်အချို့သာဖြစ်သည်။ မင်း သူတို့ကို ကြိုက်လား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း » အလှဆင် » ခေတ်မီဧည့်ခန်းများကို ဆေးခြယ်နည်း- အရောင်များကို ကောင်းစွာရွေးချယ်ပါ။
Concept-Usine- သင့်အိမ်၏ အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းအတွက် အရာအားလုံး